Ny repositories Cydia tsara indrindra | Vaovao IPhone
Vaovao IPad | | Cydia, iOS 7
Rehefa mametraka an'i Cydia amin'ny iPhone na iPad isika rehefa manao Jailbreak, repository maro no apetraka amin'ny alàlan'ny default izay misy ny ankamaroan'ny rindranasa izay mety tadiavin'ny mpampiasa mahazatra apetraka amin'ny fitaovany. BigBoss sy ModMyi no loharano na repositories izay misy 99% amin'ireo fampiharana Cydia mety hahaliana, saingy ny tontolon'ny Jailbreak dia tsy mijanona eo, satria misy endritsoratra maro hafa miaraka amina fampiharana manokana mety hahaliana ny sasany aminareo izany. Nifantina ny tsara indrindra izahay.
Iray amin'ireo fampiharana ilaina amin'ny iPad. Iray amin'ireo mpilalao haino aman-jery tsara indrindra azonao jerena amin'ny iPhone sy iPad, na ho an'ny asany na ho an'ny vidiny (maimaim-poana). Izy io dia manana fahaizana mampiditra fantsom-pifamoivoizana ary mifandray amin'ny kapila tambajotra, toy ny TimeCapsule anao na kapila hafa nozaraina. Manohana izay endrika video azonao ampiasaina. Raha hametraka azy dia tsy maintsy ampidiro ny repo ofisialy amin'ny Cydia: fitaratra.xbmc.org/apt/ios. Manana ianao boky fampianarana feno hametrahana ny rindranasa ao amin'ny iPad News.
Iray amin'ireo mpamorona fampiharana Cydia tsara indrindra. Ryan Petrich no tompon'andraikitra amin'ireo fanitsahana fanta-daza toa an'i Activator na Display Recorder. Na dia ao anaty repos (BigBoss sy ModMyi) matetika aza ny fampiharana rehetra ao aminy, ny developer dia manolotra anay ny toerana anaovany azy manokana izay ametrahany ny betas ny fangatahany alohan'ny ahafahan'izy ireo hita ao amin'ny toerana ofisialy. Raha te hankafy ireo kinova vaovao amin'ny fampiharana ianao alohan'ny olon-kafa dia mila ampidiro amin'ny Cydia fotsiny izao repo izao: rpetri.ch/repo.
iCleaner dia iray amin'ireo rindranasa tsara indrindra hanalana ny junk amin'ny fitaovanao. Maimaimpoana ny fampiharana ary azonao atao ny misintona azy avy amin'ny repo BigBoss, fa raha tianao ny kinova "Pro", miaraka amina safidy maromaro kokoa ho an'ireo mpampiasa mandroso kokoa, azonao atao izany amin'ny repo ofisialy: exile90software.com/cydia.
Angamba tsy dia fantatra loatra, fa tena ilaina. Parrot Geek dia manolotra andian-dahatsoratra izay mety hahaliana ny maro. Manolotra vahaolana amin'ny olan'ny bara fanefena izay tsy miova loko tsara rehefa vita ny jailbreak: Status Bar Fix Ultimate. Ny hafa koa toa ny iOS 7 Adrenaline hanafainganana ny sarimiaina, na Siri Old Voice ho an'ny iOS 7 hamerina ilay feo taloha an'ny Siri ao amin'ny iOS 6. Tsy maintsy ampidirinao amin'ny Cydia ity repo manaraka ity: parrotgeek.net/repo.
Azo antoka fa maro aminareo no tsy mahita repo izay tsy ao anaty lisitra. Manentana anao izahay hizara izany aminay. Ampahatsiahiviko anao fa tsy misy fotoana tokony hiresahantsika ireo repo "pirate", azafady.
Fanazavana fanampiny - Ampifanaraho amin'ny iPad (I) ny XBMC: ampifandraiso amin'ny kapila tambajotra
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao IPhone » Jailbreak » Cydia » Ny trano fitahirizana Cydia tsara indrindra
Air Europa manavao ny fampiharana ao anatiny sy ivelany